Bit By Bit - Misa kubatsirana - 5.3.1 Netflix Prize
Chinonyanya yaizivikanwa pachena kudanwa chirongwa ndiye Netflix Mubayiro. Netflix chinhu paIndaneti Movie Rental kambani, uye muna 2000 nayo yakatanga Cinematch, basa kuti varumbidze mabhaisikopu kuti vatengi. Somuenzaniso, Cinematch kuti cherechedza kuti iwe aifarira Star Wars uye Empire Yaitika Kare uye ipapo vanoti kuti iwe tarisa Dzokai of Jedi. Pakutanga, Cinematch akashanda zvakanaka. Asi, nokufamba kwemakore mazhinji, Cinematch akaramba kuvandudza mano ayo kuti kufanotaura mafirimu vatengi inganakirwa. Zvisinei, By 2006, mberi Cinematch plateaued. Vaongorori pana Netflix akanga aedza akanyatsorevesa zvose zvavaigona kufunga, asi panguva imwe chete, ivo vakafunga kuti paiva nezvimwe pfungwa kuti kuvabatsira kuvandudza maitiro avo. Nokudaro, vaikwira zvakanga, panguva, yakakura yokugadzirisa: ive runhare rakashama.
Critical kuvanozova kubudirira Netflix Prize aiva sei yakashama kudanwa yakagadzirwa, uye magadzirirwo ichi ane zvidzidzo zvinokosha nokuda sei akazaruka zvinoda zvinogona kushandiswa mumagariro tsvakurudzo. Netflix haana chete kudzima chikumbiro unstructured nokuda pfungwa, izvo ndiko vanhu vazhinji fungidzira pavanotanga funga pachena kudanwa. Asi, Netflix wakakonzera dambudziko wakajeka ine nyore paakamubvunzurudza dzekuziva: ivo akashora vanhu kushandisa kutaridza firimu ratings mamiriyoni 100 kufanotaura mamiriyoni 3 rakaitirwa-panze ratings (ratings kuti vanoshandisa aita asi kuti Netflix haana kusunungura). Ani naani anogona kusika chinhu algorithm aigona kufanotaura miriyoni 3 rakaitirwa-panze ratings 10% kupfuura Cinematch kwaizoita kuhwina mamiriyoni 1 emadhora. Izvi zvakajeka uye zviri nyore kushandisa wakatarwa zvinodiwa-kuenzanisa afanotaura ratings kuti inoitwa-panze ratings-zvaireva kuti Netflix Prize yakanga yakaitwa nenzira kuti zvingaitwa dziri nyore kuona pane chamutsa; Zvakazoitika nedambudziko kuvandudzika Cinematch kuva dambudziko akakodzera kuti kudanwa rakashama.
Muna October 2006, Netflix yakabudisa dataset ine firimu ratings mamiriyoni 100 kubva munenge anenge 500,000 vatengi (tichakurukura toga zvinorehwa ichi date kusunungurwa muChitsauko 6). The Netflix date zvinogona conceptualized sezvo chihombe chizvaro kuti inenge 500,000 vatengi kubudikidza mafirimu 20,000. Mukati chizvaro ichi, paiva ratings vanenge mamiriyoni 100 pamwero kubva nyeredzi 1 kusvika 5 (Table 5.2). Dambudziko raiva kushandisa kuchengetwa mashoko ari chizvaro chokufungidzira miriyoni 3 rakaitirwa-panze ratings.
Table 5.2: Schematic pakati mashoko kubva Netflix Mubayiro. Netflix akasunungura ratings anenge mamiriyoni 100 (1 nyeredzi kuti 5 nyeredzi) inopiwa 500,000 vatengi pamusoro mafirimu 20,000. Chinangwa Netflix Prize aifanira kushandisa ratings izvi kufanotaura inoitwa-panze ratings mamiriyoni 3 mafirimu, kuratidzwa se "?". Rakafanotaura ratings vakabvuma kubudikidza vechikamu muna Netflix Prize vakanga zvichienzaniswa inoitwa-panze ratings. Ini ichakurukura penyaya nyaya dzakapoteredza ichi date kusunungurwa muChitsauko 6.
Vatsvakurudzi uye hackers munyika vakakwezva dambudziko, uye kubudikidza 2008 vanopfuura 30.000 vanhu vakanga vachishanda pairi (Thompson 2008) . Mutariri weboka nemakwikwi, Netflix akagamuchira kupfuura 40.000 aronga mhinduro kubva zvikwata kupfuura 5,000 (Netflix 2009) . Zviri pachena, Netflix asingagoni kuverenga uye kunzwisisa zvose izvi zvinotsigira mhinduro. Zvose Zvisinei akamhanya zvakanaka, nokuti mhinduro vaiva nyore kuti aone. Netflix aigona chete vane kombiyuta akafananidza afanotaura ratings kuti inoitwa-panze ratings noruoko pre-yamunenge arşive (chaiwo vakashandisa yaiva muchivara mudzi Zvichakadaro-mativi mana akaenzana kukanganisa arşive). Zvaiva kugona ichi kuti nokukurumidza uongorore mhinduro kuti akwanise Netflix kugamuchira zvinogadzirisa kubva vose, izvo zvakazoita kuti zvinokosha nokuti pfungwa dzakanaka vaibva dzimwe nzvimbo inoshamisa. Kutaura zvazviri, richakunda mhinduro yakanga pasi ne chikwata zvakatangwa vaongorori vatatu vasina asati ruzivo chivakwa Movie dzokurumbidza mugadziriro (Bell, Koren, and Volinsky 2010) .
Imwe tsvarakadenga chinoumba Netflix Prize ndechokuti chakabatsira wose munyika kuti avo chigadzikiso yaizoongororwa zvakarurama. Apo vanhu uploaded afanotaura ratings avo, havana vanofanira Upload pezvavaiva zvedzidzo, avo zera, rudzi, munhurume, zvepabonde, kana chimwe chinhu pamusoro pavo. Nokudaro, akafanotaura ratings ane yakakurumbira muzvinadzidzo kubva Stanford vakanga kubatwa chaizvoizvo kufanana nevaya kubva kuyaruka kwake yokurara. Zvinosuruvarisa, ichi hachisi chokwadi dzakawanda munzanga tsvakurudzo. Ndiko, nokuti vakawanda munzanga tsvakurudzo, kuongorora ndiyo nguva chaizvo unoparadza uye zvishoma kuzviitira. Saka, vakawanda tsvakurudzo pfungwa hazvitombokohwewi dzinoongororwa zvakakomba, uye kana pfungwa dzinoongororwa, zvakaoma patsanura Mutengo avo kubva musiki pfungwa. Nokuti zvingaitwa zviri nyore kuti tione, akazaruka zvinoda kubvumira vatsvakurudzi kuti kuwana zvose dzingadai anoshamisa machengeterwo kuti raizokundwa kuburikidza makatsemuka kana ivo chete vaiona negadziriso kubva nomukurumbira mapurofesa.
Somuenzaniso, pane imwe nguva munguva Netflix Prize munhu chidzitiro zita Simon Funk Posted on ake Blog munhu aronga mhinduro inobva kamwe chete ukoshi manyowa, imwe nzira kubva Linear nemasvomhu akanga asina kushandiswa kare nedzimwe vechikamu. Funk kwakaita Blog romukova akanga achichengetedza hwokugadzira uye weirdly yakajairwa. Akanga ichi Blog romukova kurondedzera kunaka kana yaive kutambisa nguva? Kunze rakavhurika kudanwa chirongwa, mushonga kuti kumbobvira vatopiwa chakakomba pakuongorora kwacho. Pashure pezvose Simon Funk akanga asiri purofesa Cal Tech kana with; aiva purogiramu yokuvaka uyo, panguva, akanga war kumativi New Zealand (Piatetsky 2007) . Kudai akanga emailed pfungwa iyi imwe injiniya panguva Netflix, izvozvo zvinenge zvirokwazvo vangadai vasina ainyepa.
Sezvineiwo, nokuti kuongorora zvinodiwa vaiva zvakajeka uye nyore kushandisa, ratings ake yakafanotaura vakanga dzinoongororwa, uye zvaiva pakarepo pachena kuti aaiita akanga simba kwazvo; iye rocketed kunzvimbo chechina ari makwikwi, zvikuru mugumisiro yakapiwa kuti zvimwe zvikwata akanga atove kushanda kwemwedzi pamusoro dambudziko. Pakupedzisira, mativi Simon Funk kwaiita vakashandiswa chinenge zvose vakwikwidzi zvakakomba (Bell, Koren, and Volinsky 2010) .
Chokwadi chokuti Simon Funk akasarudza kunyora Blog mumhanyi achitsanangura matauriro ake, pane kuedza irambe pakavanda, inojekesawo kuti vatori mazhinji Netflix Prize havana chete hwaikurudzirwa mamiriyoni dhora mubayiro. Asi, vatori vazhinji vaiita kunakidzwa njere dambudziko uye munzanga kuti otaurwa dambudziko (Thompson 2008) , manzwiro kuti ndinotarisira vaongorori vakawanda vanogona kunzwisisa.
The Netflix Mubayiro ndiwo chaiwo muenzaniso runhare rakashama. Netflix akabvunza mubvunzo ine chinangwa chaicho (vachifanotaura firimu ratings) uye kuboka negadziriso kubva kuvanhu vakawanda. Netflix akakwanisa kuongorora zvinogadzirisa zvose izvi nokuti vakanga nyore kuziva pane kusika, uye pakupedzisira Netflix akabata chinetso. Zvadaro, Ndichakuratidza ndikuratidzei sei izvi nzira chete inogona kushandiswa biology uye mutemo.